के हुँदै छ दशैंका लागि खाद्यान्न आपूर्ति ?
काठमाडौं, भदौ ३१ गते । हरेक वर्ष चाडपर्वको समयमा कर्णालीलगायत विकट र दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न सङ्कट हुने गर्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कर्णालीलगायत विकट र दुर्गम क्षेत्र रहेका २४ जिल्लामा वर्षायाममा खाद्यान्न ढुवानी गर्न नसकिन्ने जनाएको छ ।
यस वर्षको चाडपर्व पनि हरेकको घर आँगनमा भित्रिसकेको छ भने हिन्दुहरुको महान चाड दशैं आउन करिब एक महिना मात्र बाँकी छ । स्थानीय उत्पादन प्रायः ठप्प हुने हुँदा कर्णालीलगायत विकट र दुर्गम क्षेत्र रहेका २४ जिल्लामा खाद्यान्न सङ्कट निम्तिने गर्छ । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले भने बर्षायाममा कसरी खाद्यान्न ढुवानी गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ ।
‘बर्षामा कसरी ढुवानी हुन्छ ? स्थलमार्गबाट ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हवाई मार्गबाट हुम्लामा मात्र खाद्यान्न ढुवानी हुन्छ । जसले गर्दा अहिले केही मात्रामा खाद्यान्न ढुवानी भइरहेको छ भने हवाइमार्गबाट खाद्यान्न ढुवानीको लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौं । अब प्रक्रिया अनुसार ढुवानी हुन्छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले भन्नुभयो ।
कम्पनीले बाँके र सुर्खेतबाट हुम्ला सिमकोटसम्म १० हजार क्वीन्टल खाद्यवस्तु हवाई ढुवानी गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको छ । साउन १५ गते कम्पनीले हवाईमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीसम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना जारी गरेको थियो ।
त्यस्तै भदौ २३ गते पुनः कम्पनिले सूचना जारी गर्दै कम्पनिको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीबाट दार्चुला जिल्लाको सदरमुकामसम्म ट्रकबाट र सदरमुकामदेखि व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १,२,३ र ४ सम्म हेलिकप्टरबाट खाद्यवस्तु ढुवानी गराउनुपर्ने जनाएको छ ।
‘उक्त काम गर्नको लागि स्थानीय लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका, इजाजत प्राप्त इच्छुक हेलिकप्टर कम्पनी वा कार्गो एजेन्सीले यो सूचना र बोलत्र कागजातमा उल्लेखित शर्तहरुका अधिनमा रहने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ बमोजिम देहायको मितिमा बोलपत्र खरिद गर्ने र दाखिला गर्ने गरी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।,’ कम्पनीद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
खाद्य संस्थाले विकट र दुर्गम क्षेत्रमा समयमा चामल ढुवानी नगर्दा भोकमरीको अवस्था समेत सिर्जना हुने गरेको छ । यता कम्पनीले कर्णालीलगायत विकट र दुर्गम क्षेत्र रहेका २४ जिल्लामा खाद्यान्न सङ्कट समाधानका लागि दीर्घकालीन समाधान नखोज्दा दुई किलो चामलका लागि दुई दिनको यात्रा गर्न बाध्य छन्, यहाँका नागरिक ।
लिमिटेड दुर्गम जिल्लाहरुमा खार गरि साविक कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरुमा प्राप्त भएको कोटालाई खाद्य व्यवस्था समितिमा जानकारी गराई समितिको निर्णय–कार्यविधि बमोजिम बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । यसैगरी विगतका वर्षहरुको असद अभ्यास, सुगम दुर्गम जिल्लाहरुको खाद्य अवस्थालाई मध्यनजर गरि प्रत्येक जिल्लाको लागि बिक्री कोटा छुट्याइएको छ । प्राप्त कोटालाई बिक्री वितरण गर्न उत्साहित हुनुपर्ने र बिक्री नभएका समिक्षात्मक टिप्पणीसहित प्रधान कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने लिमिटेडले जनाएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १८ को उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो संविधान जारी भएको वर्षौ बित्दा पनि खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी कानुन आउन सकेको छैन । जसले गर्दा कर्णालीलगायत बाजुरा, हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट र दार्चुलाका दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरु प्रत्येक वर्ष खाद्यन्न अभावबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् ।
त्यसो त कम्पनीले यही भदौ ११ गते खाद्यान्न बिक्री तथा मौज्दातको सारांश विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जसमा कुल १९ लाख ५७ हजार क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको जनाएको छ । कुल खाद्यान्न मौज्दातमध्ये सुगम जिल्लामा ८६ हजार ७९२ चामल र २४ दुर्गम जिल्लामा २३ हजार २७३ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसअनुसार कुल ११ लाख क्विन्टल चामल मौज्दात छ । यसैगरी ७५ हजार ९६८ क्विन्टल धान र नौ हजार ७३६ क्विन्टल गहुँ मौज्दात छ ।
यता सात हजार ४६५ क्विन्टल चामल बोलपत्रको माध्यमबाट प्राप्त हुने कम्पनीले जनाएको छ । साथै सुगम जिल्लामा बिक्री परिमाण छ हजार र २४ दुर्गम जिल्लामा बिक्री नौ हजार २८४ क्विन्टल छ । जम्मा बिक्री परिमाण १५ हजार ५,४८ रहेको खाद्य कम्पनीले जनाएको छ ।
साविकको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानलाई गाभ्ने सरकारी निर्णयपछि २०७६ साउन १८ गते खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको थियो ।
कम्पनी स्थापनापछि सरकारले कर्णालीलगायत विकट र दुर्गम क्षेत्र रहेका २४ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने जिम्मा दिएको थियो । सरकारले जिम्मा दिएपछि कम्पनीले चामल, गहुँ र धान ढुवानी गर्दै आएको छ । कम्पनीले विकट क्षेत्रमा अधिकांश क्षेत्रमा हवाई मार्गबाटै खाद्यान्न ढुवानी गर्छ । तर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले हुम्लामा मात्र हवाई मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी हुने र बाँकी क्षेत्रमा स्थलमार्गबाटै ढुवानी हुने बताउनुभएको छ ।
सरकारले कम्पनीलाई ३३ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न सञ्चित गर्ने जिम्मा दिएको छ । कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिएर खाद्यान्न खरिद गर्छ भने सो ऋणको ब्याज सरकारले नै तिरिदिन्छ ।
कम्पनीले एउटा गोदाममा सञ्चित गरेको खाद्यान्न अर्को गोदाम या डिपोसम्म ढुवानी गर्न बोलपत्र आह्वान गर्ने गर्छ । यसका लागि कम्पनिले साउन १५ गते हवाईमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीसम्बन्धी गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना जारी गरेको थियो ।
खाद्य कम्पनीको खाद्यान्न ढुवानी गर्न यो वर्षमात्रै सरकारले ४६ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । कम्पनीले हुम्लामा मात्रै वार्षिक २० करोड रुपियाँभन्दा बढीको खाद्यान्न ढुवानी गर्ने गरेको छ ।
नेपालमा भिसाविना प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै
‘ससः’ अर्थात् ससुराली खाजाघर
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ १२ गते गर्ने निर्णय
गाेलाप्रथाद्वारा इजलास ताेक्ने कार्यविधि पारित, भाेलिबाट नियमित सुनुवाइ
अस्पतालहरूमा घट्दै सङ्क्रमित, धुलिखेल अस्पतालमा शून्य
गत आबमा २२ हजार उजुरी दर्ता, सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा
राष्ट्रियसभाकाे निर्वाचनको तयारीमा आयोग, मिति घाेषणा कुर्दै
दोस्रो चरणमा ९६ श्रमिक कोरिया पठाइँदै, १२ हजार प्रतीक्षामा